घर एशियाई-ओशियनियन फुटबल स्टोरीहरू टर्की फुटबल खेलाडीहरू हाकान Calhanoglu बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाकान Calhanoglu को हाम्रो जीवनी उनको बचपन कहानी को बारे मा तथ्यहरु चित्रण, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, पत्नी, बच्चाहरु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थ।
सरल शब्दहरूमा, हामी तपाईं मिडफिल्डरको क्यारियर यात्रा प्रस्तुत गर्दछौं, बाल्यकालदेखि, जबसम्म उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूख मिल्नको लागि, यहाँ उनको बाल्यकाल वयस्क ग्यालेरी हो - हाकान Calhanoglu बायो को एक सारांश।
हो, तपाइँ र मलाई थाहा छ टर्कीका प्लेमेकर विश्व-स्तरीय फुटबलर बन्ने बाटोमा छन् आफ्नो साथीलाई जस्तै Zlatan Ibrahimovic। यद्यपि धेरै प्रशंसकहरूलाई आफ्नो जीवन कहानीमा यो उपलब्धि हासिल गर्न उसले जितेका अवरोधहरूको बारेमा थाहा छैन। तसर्थ, हामीले उहाँको बायो तपाईंको लागि मात्र तयार गरेका छौं र थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
हाकान Calhanoglu बचपन कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, हाकान Calhanoglu उहाँ फेब्रुअरी १ ​​8 1994 of को आठौं दिनमा जन्मनुभएको थियो। उहाँ यस बुबालाई जर्मनीका म्यानहाइममा आफ्ना बुबा, हुसेन काल्हान्ल्लु र आमा नाइम कल्हानोग्लु मार्फत यस संसारमा आउनुभयो। के तपाईंलाई थाहा छ?… फ्रि-किक प्रतिभा यहाँ चित्रमा आफ्ना बाबुआमाको बीच मिलनबाट जन्मेका दुई बच्चाहरु मध्ये जेठो हो।
उनका अद्भुत अभिभावकहरू, हुसेन र नाइम Calhanoglu भेट्नुहोस्।
हाकान Calhanoglu बढ्दो दिन:
सेट-बाट, जवान तुर्क मन्नहेमको सडकमा उसको बच्चा भाई, मुहम्मदसँग हुर्केका थिए। त्यहाँ तिनीहरूले अरू बच्चाहरूसँग सडक फुटबल खेल्ने बानी खेती गरे। किनभने उनका बुबा फुटबल प्रति गहिरो प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, उनीहरु आफ्ना साथीहरु संग उनीहरुका लगातार साँझको तालिकामा आपत्ति जनाउँदैनथे।
हाकान Calhanoglu परिवार मूल:
जर्मनीमा जन्मनुको मतलब यो होइन कि टर्कले आफ्नो जन्मभूमिको अस्तित्व बिर्सनुभयो। एक स्थापित खेलाडी को रूपमा, Calhanoglu आफ्नो मूल स्थान मा धेरै भ्रमणहरू भुक्तान गरेको छ। अरू के छ?… ऊ टर्कीको बेबर्ट प्रान्तको कोनुरुस गाउँको मूल निवासी हो। २०१० सम्म उनको गृहनगरमा करीव १,2010 व्यक्तिको जनसंख्या रहेको थियो।
यो त्यहाँ हो जहाँ हाकानको परिवार आउँदछ।
हाकान Calhanoglu परिवार पृष्ठभूमि:
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरुको धैर्य त्यस्तो प्रकारको थिएन जसलाई सुपर-धनी भनेर वर्णन गर्न सकिन्छ। यद्यपि तिनीहरू आर्थिक रूपमा स्थिर थिए र हकानको बाल्यावस्था पनि पछिल्लो खेलौना स Hak्कलनको साथ देखा पर्दछन्। धन्यबाद, त्यो केटाको आमा बुबाको राम्रो वित्तीय शिक्षा थियो। तसर्थ, तिनीहरूले आफ्नो आर्थिक को तरीका सबै भन्दा किफायती तरीकाले व्यवस्थापन गर्न सक्थे।
हाकान Calhanoglu अनटोल्ड कहानी:
जब टर्कले ocked मा घडीयो, उनको बुबाले उनलाई आसपासको एक स्थानीय संस्थानमा भर्ना गर्न लगाउनुभयो। पछि, Calhanoglu एक निर्दोष बच्चा थियो जुन केवल कुनै पनि दिशामा बल लात कसरी थाँहा थाँहा थियो। तर उनका आमाबुवालाई ठूलो आशा थियो कि उहाँ वाल्डहोफ म्यानहाइम एकेडेमीमा भर्ना हुनुभयो भने उनीहरूको छोराले ठूलो सुधार गर्ने छ।
सुरुमा, मिडफिल्डरले सजिलैसँग आफ्नो प्रशिक्षकहरूको निर्देशनहरू पूरा गर्न सकेन। यद्यपि उनले प्रायः आफ्नो असुविधाको बारेमा सोच्नु भन्दा पहिले आफ्ना बाबुआमाप्रति उसको बानी परे। तसर्थ, Calhanoglu आफ्नो क्षमतामा सुधार गर्न र आफ्नो परिवारलाई गर्व बनाउन कडा परिश्रम गरे।
हाकान Calhanoglu प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
आठ वर्षसम्म वाल्धोफको लागि प्रदर्शन गरेपछि, सेट-पीस लिनेलाई कार्सुहेर एससीले चिच्याए जसले उसलाई आफ्नो युवा टीममा लगे। त्यहाँ उसले फुटबलमा ट्र्याक प्राप्त गर्न सुरु गर्यो। उही अवधिमा, Calhanoglu जो माथि हेर्नुहोस् Mesut Ozil बिभिन्न अवसरहरूमा उसको देशको लागि फिचर गर्न बोलाइएको थियो।
उसको Karsruher अनुसूचित जातिमा दिन भव्य थियो।
थप उत्कृष्ट उपलब्धिहरूको खोजीमा उनका अभिभावकको साथ, लामो शट लिने व्यक्ति २०१ 2013 मा ह्यामबर्गर एसभीमा सरे। जर्मन क्लबसँग उसको समय छोटो थियो। जे होस्, यो ह्यामबर्गरमा थियो कि टर्कीका खेलाडीले प्रदर्शन गर्न हिम्मत गरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्री-किकहरू लिएर। अवश्य पनि, उनी टाढा टाढाको टुक्रा लिनमा निकै राम्रो थिए।
हाकान Calhanoglu बायो - फेम कहानी कहानी:
२०१ 2014 मा बायर लेभेरकुसेनमा उनको कदम पछि, २० बर्षे वृद्धले आफूलाई आफ्नो बुबाको सपनाको पछाडि बढिरहेको देखे। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनले यो सुनिश्चित गरे कि १ him..20 मिलियन डलर उनको अधिग्रहणमा व्यर्थ नहोस्। तसर्थ, उसले गोल स्कोर गर्न र धेरै सहयोगी बनाउन शुरू गर्यो।
हकानको लागी ठूलो आनन्द अरू कुनै कुरा होइन जब उसले गोल गरे।
के तपाईंलाई थाहा छ? ... प्रतिभाशाली खेल निर्माता २०१ 2017 मा एसी मिलानमा सम्मिलित हुने राम्रो अवसरमा समाहित भयो। उनले इटालियन क्लबसँग २€ मिलियन डलरको चार बर्षको अनुबन्धमा हस्ताक्षर गरे - जसमा उनकी आमाले उहाँबारे लगातार घमण्ड गर्‍यो।
एसी मिलानको साथ हस्ताक्षर गरेर उसले अर्को माइलस्टोन पार गर्‍यो।
जर्सी नम्बर १० दिइएमा धेरै फ्यानहरूले टर्कबाट असाधारण प्रदर्शनको अपेक्षा गरे। दुःखको कुरा, Calhanoglu को परिवारको पहिलो छोरा समर्थकहरु सम्म भेट भएन। उहाँ पिचमा असंगत हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो अभाव क्षमता सुधार गर्न कडा परिश्रम गर्नुभयो।
हाकान Calhanoglu बायो - सफलता कहानी:
कुनै टाढा समयमा, फ्रि किक प्रतिभाले एक उल्का सुधार गरे जसले धेरै विश्लेषकहरू उनी बारे कुरा गर्थे। के अनुमान गर्नुहुन्छ?… उसको नामले इतिहास बनायो किनकि उनले एक सहयोगी प्रदान गरे राफेल लिओजसले २१ डिसेम्बर २०२० मा सेरी एमा सब भन्दा छिटो गोल गरे। यति मात्रै, घडीमा prec.२ सेकेन्डमा ठ्याक्कै पनी गोल गरिएको युरोपको शीर्ष पाँच लिगमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा द्रुत गोल भयो।
उनले राफेल लिओलाई सेरी ए इतिहासको सब भन्दा तेज गोल गर्न सहयोग गरे।
जब म यो बायो लेख्छु, धेरै क्लबहरू उसको हस्ताक्षरको खोजीमा छन्। यद्यपि हामीलाई शंका छ जुभेन्टस 2021 मा हाकान Calhanoglu साइन इन गर्न सक्दछ। हुनसक्छ फ्रि किक प्रतिभाले एसी मिलानसँग उसको सम्झौता विस्तार नगर्न सक्छ यदि उनीहरूले आफ्नो वार्षिक तलब million मिलियन डलर गर्न असफल भए। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
हाकान Calhanoglu को श्रीमतीको बारेमा:
जब यो मुटुको मामिलामा आउँदछ, सेट-पीस लिने ले आफ्नो साथीलाई भन्दा टाढा कदम चालेको छ, Cengiz अन्तर्गत। तथ्यको रूपमा, हाकनले २०१ childhood मा म्यानहाइममा उनको बाल्यकालकी प्रेमिका, सिनेम गुन्डोग्डुसँग विवाह गरे।
यद्यपि, तिनीहरूको प्रेम कहानी परी कथामा जस्तो सहज रूपमा गएको थिएन। उनको विवाहको केही महिना पछि, Calhanoglu को सम्बन्ध विच्छेद भयो किनभने उनकी श्रीमतीले उनीमाथि अर्को महिलासँग छेउछाउ गरेको आरोप लगाइन्। तसर्थ, उहाँ आफ्नो लामो समय गर्लफ्रेंड बनेको श्रीमती को सम्बन्धविच्छेदको छेउमा थिए।
धन्यबाद, २०१ 2018 मा दम्पतीहरूले मेलमिलाप गरे र आफ्नो विवाहलाई नयाँ बिहान दिने निर्णय गरे। यसैले, उनीहरूको मिलनबाट लीया नामको सुन्दर छोरीको जन्म भयो। जब म यो बायो लेख्छु, लियाको बुबा जो इब्राहिमोभिकको साथी पनि हुन् उसको दोस्रो जन्म भएको बच्चाको आशा गरिरहेको छ।
“अर्को सानो चमत्कार हाम्रो परिवारमा आउँदैछ। हामी खुसी छौं कि हाम्रो लीया चाँडै हाम्रो अजन्मे बच्चाको बहिनी बन्ने छ। आऊ, स्वस्थ बच्चा। "
आफ्नी श्रीमती र छोरीसँग हकन धेरै काममा सिपालु भएको महसुस गर्छन्।
हाकान Calhanoglu निजी जीवन:
धेरै प्रशंसकहरु को उनको नम्र व्यक्तित्व तुलना छ क्यागलर सोयुनु। हो, उहाँ कोमल, इमानदार र सहजै हुनुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा, कहिलेकाहिँ जब Calhanoglu केहि बच्चाको खेल मा लागी तनाव कम गर्न र साथीहरु संग गुमाएको समय गुमाउन को लागी।
पिच बाहिर, २dवर्ष पुरानो टर्कको साथ कुनै सुस्त क्षणहरू छैनन्।
मिडफिल्डर पनि एक महान संगीत प्रतिभा संग सम्पन्न छ। जब उसका साथीहरू जन्मदिन मनाउन दुई वा दुई पाउँदछन्, हाकान जहिले पनि मानिस हुन्छ जसले शोलाई जीवन्तताले भर्दछ। पक्कै पनि, उसले एक महान डीजे बनाएको थियो यदि सोकरले कहिल्यै बाहिर काम गर्दैन।
उसको डीजे कौशल औसत भन्दा बढि जान्छ।
हाकान Calhanoglu जीवन शैली:
एसी मिलानको लागि प्रस्तुत गर्दा, उसको वार्षिक तलब २€ लाख डलर (२०२१ तथ्याats्क) को अनुमानित रकममा बढेको छ। मैले यो बायो लेख्दा, म्यानहाइममा हुर्केका केटा एक विलासी जीवनशैली बिताउँछन्।
आफ्नो आय संग, उनले यति धेरै फ्ल्याश कार र एक सुन्दर घर किन्नुभएको छ। उहाँ आफ्नो परिवारसँग महँगो निजी जेटमा पनि यात्रा गर्नुहुन्छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि हाकान Calhanoglu २०२१ सम्ममा अनुमानित Wor 9.9।। मिलियन डलर बराबर सकिएको छ।
उसको जीवन सहजै गएको छ र विपुल अनुभवले भरिएको छ।
हाकान Calhanoglu पारिवारिक जीवन तथ्यहरू:
उसको क्यारियर सफलता पछाडि त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसको अटल विश्वासले उनलाई कडा परिश्रम गर्ने आंत प्रदान गरेको छ। जब तिनीहरू उत्कृष्ट हुन्छन् र प्रोत्साहन दिउँदछन्, परिस्थिति गलत भए पछि तिनीहरू उहाँसँगै मनाउँछन्। उसको परिवारका सदस्यहरूका बारे जानकारीमूलक खण्ड हेर्नुहोस्।
जब उनी आफ्नो परिवारसँग केहि समय बिताउँदछन् तब उनको आनन्द बढ्छ।
हाकान Calhanoglu आमाको बारेमा:
उनको आमालाई (नाइम Calhanoglu) धन्यवाद, मिडफिल्डर एक नैतिकता को एक महान भावना संग हुर्केका छ। आफ्ना छोराहरूलाई हुर्काउन श्रीमती नामेको उत्कृष्टता वर्णन गर्न पर्याप्त शब्दहरू छैनन्। हामीलाई मात्र थाहा छ उहाँ एक शिक्षित र ख्याल राख्ने आमा हुनुहुन्थ्यो जसले उनको सुखसुविधा भन्दा पहिले आफ्ना बाल कल्याणलाई प्राथमिकता दिइन्।
उसको उमेर भन्दा उनको आमा धेरै कलिलो देखिन्छ।
हाकान Calhanoglu बुबाको बारेमा:
खेलमा हाकनको चासोको अग्रगामी उसका बुवा हुसेन काल्हानोग्लु हुन्। उहाँ एक गैर-लिग फुटबल खेलाडी हुनुहुन्थ्यो जसको खेलकुदको जुनसुकै उमेरमा पनि मरेन।
हाकनका बुबालाई भेट्नुहोस्, उसको फुटबल अभियान पछाडि मास्टरमाइन्ड।
आफ्नो सेवानिवृत्ति पछि, श्री Huseyin फुटबल मा एक महान क्यारियर निर्माण मा धेरै बच्चाहरु को प्रशिक्षक गए। अरू के छ? ... हाकनका बुबा Calhanoglu फुटबल केन्द्र (म्यानहाइममा खेलकुद संस्थान) को संस्थापक हुनुहुन्छ।
हाकान काल्हानोग्लुका भाइबहिनीहरूका बारे:
उसको परिवारको पहिलो छोरा हुनु भनेको जर्मन नस्ल खेलाडी आफ्नो भाइ मुहम्मद Calhanoglu को लागी एक राम्रो उदाहरण स्थापित गर्नु पर्छ। निस्सन्देह, उसले गरे, र आज, उनको कान्छो भाईले आफ्नो र बुबाको जस्तै बाटो पछ्यायो।
यस्तो देखिन्छ कि उसको भाइले उनी भन्दा राम्री मुस्कान पाएको छ।
मुहम्मद एक मिडफिल्डर हो जसले आफ्नो युवा क्यारियर उही एकेडेमी (वालधोफ र कार्लस्रुरु एससी) मा उनको ठूलो भाईको रूपमा गरेका थिए। दुःखको कुरा, उसले आफैंलाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको माथिल्लो तहमा स्थापित गरेको छैन।
हाकान Calhanoglu नातेदारहरूको बारेमा:
२०२१ सम्म, हाकानका दुईजना काका, टुरान र केरिम, क्रमशः होफेनहिम U2021 र एफसी शल्के ० 19 लाई प्रस्तुत गर्दै थिए। ती मध्ये टुरान Calhanoglu उनको रगत मा गोल स्कोरिंग क्षमता मिल्यो। मैले यो बायो लेख्दा उसको हजुरबा हजुरआमाको बारेमा कुनै जानकारी छैन।
उनका भतीजन, टुरान (एल) र केरिम (आर) लाई भेट्नुहोस्।
हाकान Calhanoglu अनटोल्ड तथ्यहरू:
हाम्रो टाढाको शूटरको जीवन कथा समेट्न, यहाँ उहाँको बारेमा केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उहाँको जीवनीको पूर्ण समझ लिन मद्दत गर्दछ।
तथ्य # १: Trabzonspor संग कानूनी मामला:
बायर लेभेरकुसेनमा उनको सम्झौता नजिक हुनु भन्दा पहिले, फिफाले कल्हानोग्लुलाई चार महिनाको लागि प्रतिबन्ध लगायो किनभने सम्झौताको उल्ल .्घन भएको थियो। टर्की क्लब ट्राब्जोनस्पोरबाट १०,००,००० डलर प्राप्त गरिसकेपछि, डिस्ट्यान्स शूटर २०११ मा कार्लस्रुहेसँगको आफ्नो करार विस्तार गर्दै अन्त भयो।
तसर्थ, फिफाले गलतफहमीको तस्वीरमा कदम चाल्नु पर्‍यो र उनले ट्र्राभ्सनपुरबाट उनले प्राप्त गरेको १०,००,००० डलर फिर्ता गर्नुप .्यो। यो सेट-पीस लिनको लागि गाह्रो अवधि थियो, तर उनको आमा र बुबाले उसलाई फेरि आफ्नो खुट्टामा उछाल गर्न मद्दत गर्नुभयो।
तथ्य # १: एक पागल बन्दूक कहानी:
२०१an मा उनका बुबाले प्रकट गरे अनुसार हाकानले सामना गरेको सबैभन्दा खतरनाक परिदृश्य मध्ये एक ट्याग गरिएको थियो पागल गन स्टोरी। अक्टोबर २०१ 2013 मा नेदरल्याण्ड्सले टर्कीले विश्वकप क्वालिफाइifying खेल गुमाएपछि यो सबै भयो।
त्यसबेला हाकान र ओमर तोप्रक उनीहरूको होटेलमा थिए जब उनका साथी साथी गोखान तोरे र एक अज्ञात सशस्त्र साथीले दुवैले गनपोइन्टमा धम्की दिएका थिए। तोरले त्यस्तो जघन्य कार्यलाई मास्टरमाइन्ड गर्‍यो किनभने उनको पूर्व प्रेमिका टोप्राकको साथीलाई डेटि। गर्दै थियो। धन्यबाद, सम्पूर्ण परीक्षा बिना कुनै चोटपटक समाप्त भयो।
प्रति वर्ष € 2,500,000
प्रति महिना € 208,333
प्रति हप्ता € 48,003
प्रति दिन € 6,858
प्रति घण्टा € 286
प्रति मिनेट € 4.8
प्रति सेकेन्ड € 0.08
अनुसन्धानले देखाएको छ कि एक औसत टर्की नागरिकले कम्तिमा years बर्षसम्म काम गर्नुपर्नेछ जुन हकनले एक महिनामा प्राप्त गर्छ।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो हाकान Calhanoglu को बायो, यो उसले कमाएको हो।
आफ्नो सँगी देशवासी जस्तै, Cenk Tosun, हाकान एक समर्पित मुस्लिम हो। वास्तवमा, उनी जर्मनीमा इस्लाम अभ्यास गर्ने 4.4 2015. लाख मानिस मध्ये एक हुन्। बाल्यकालदेखि नै, उनकी आमाले उनलाई प्रायः उनको मुस्लिम विश्वासको कानून र निर्देशनहरूको बारेमा सिकाउनुभएको छ। २०१ XNUMX मा, Calhanoglu, आफ्ना बुबा र भाइसँग, मक्काको काबा गए।
उनको परिवारले उनीहरूको धर्मको अभिन्न अभ्यासलाई कहिल्यै बेवास्ता गरेको छैन।
कुनै श doubts्का छैन कि उसको सम्भावितहरुलाई हामीले स्वदेशीको भन्दा Arda Turan। आफ्नो शस्त्रागारमा धेरै सीपहरू राख्दै, जर्मन-जन्मेका खेलाडीले आफूलाई एक हतियारको रूपमा स्थापित गरेका छन् जुन धेरै क्लबहरूलाई उनीहरूको मिडफील्डमा चाहिन्छ। आफ्नो रेटिंग्स सुधार गर्न, उसले आफ्नो हावामा बल हावी गर्ने क्षमतामा काम गर्नुपर्नेछ।
अन्तमा, Calhanoglu को जीवन कहानी देखाईएको छ कि हामी कल्पनाहरु वा सपनाहरु को लागी बिना सम्भावनाहरु को उत्साह हराउन। यद्यपि उनका बुबाले उनीका लागि मार्ग सिर्जना गर्नुभयो, हाकान नियतिको स्पष्ट कल पूरा गर्न जिम्मेवार थिए।
यसले हामीलाई उहाँकी आमाको प्रशंसा गर्नै पर्छ, जो सँधै कठिन समयको लागि प्रोत्साहित गर्न आएका थिए। साथै, हुसेन (उसको बुवा) र मुहम्मद (उसको भाइ) को प्रयासले हकानको क्यारियर अनुसरण गर्न मद्दत गरेको छ। यो उनीहरू सबैलाई धन्यवाद छ कि उसले फुटबलमा यति धेरै प्राप्त गर्न सक्षम भएको छ।
हाम्रो हाकान Calhanoglu बचपन कहानी र जीवनी तथ्य पढ्नको लागि धन्यबाद। यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि Lifebogger मा हाम्रो टीम तपाइँको सम्मानित फुटबलरको मनमोहक कथित कथाको साथ तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्न खोजिरहेको छ।
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाइँले केहि फेला पार्नुभयो जुन हाम्रो लेखसँग ठिक लाग्दैन। अन्यथा, हामी तपाईंलाई तलको विकी डाटामा उसको जीवन कहानीको सारांश प्रस्तुत गर्दछौं।
पुरा नाम: हाकान Calhanoglu
जन्मस्थान: म्यानहाइम, जर्मनी
पिता: Huseyin Calhanoglu
आमा: नाइम Calhanoglu
सिबलिंग: मुहम्मद Calhanoglu
पत्नी: Sinem Gundogdu
बच्चाहरु: लिया (जनवरी २०२१ सम्म मात्र छोरी)
मूल स्थान: टर्कीमा बायबर्ट प्रान्तको कोनुरु गाउँ